Goorma ayaa la ciyaari doonaa kulanka Horseed iyo Heegan Fiinaalaha Horyalka kubadad Gacanka Dalka ?
Wednesday, January 23rd, 2019 - 20:25:52
Sunday February 04, 2018 - 12:21:37 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Gacanta ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ku go’aamiyey kulanka lagu xaqiijin doono kooxda ku guuleysaneysa horyaalka ku badda Gacanta 2017-18 uu dhici doona 16 Febraayo oo ku began maalin jimco ah.
Kooxaha Horseed ayaa Heegan oo kulankaas ku ballasan ayaa Horyaalka ku dhammeystay min 27 dhibcood kadib marakaii au kala adkaadeen labadii kulan ee horyaalka isla markaana dhammaan kooxaha kale guulo ka gaareen.
Heegan ayaa 17-16 kaga adkaatay Horseed oo abrbaro ku qajinin kartay horyaalka kadib markii ay jimcihii oo ay taariikhda ku beegnayd 2 febraayo kulanki udambeeyay horyaalka ku yeesheen garoonak Wiish.
Horseed ayaan Horyaalka hanan tan 2001 oo ah marka kaliya ee ay horyaalka ku guuleysteen, halak Hegan sanadki hore oo kaliya aysan ku guuleysan kadib 10 sano oo xiriir ah oo ay horyaalka ku guuleysaneysay.
Dhanka kale waxaa jimcahaa soo aadan oo ay taariikhda ku beegan tahay 9 Febraayo garoonka Wiish ka dhici doona kulanka U dambeeyay horyaalka kubadda gacanta Gabdhaha 2017-18, waxanaa ku loolami doona kooxaha Horseed iyo Heegan oo horyaalak daafacaneysa hogaankana u haysa.